Olee otú wughachi iTunes Library
Ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ, ọtụtụ n'ime anyị na-eche ihu ụfọdụ kama iberibe anomalies anyị iTunes n'ọbá akwụkwọ. Egwu adịghị na-egosi elu ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ha na-eme, otutu mbipụta amalite pụtara ná n'ọbá akwụkwọ. Iji ihe ike maka nsogbu ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ, otu nwere ike na-wughachi ya / ya n'ọbá akwụkwọ n'ihi na nke kasị nkịtị usoro dị bụ ka ndị na:
Kasị Common Method wughachi
Mechie iTunes, chọta iTunes nchekwa na kọmputa gị / laptọọpụ na mgbe ahụ chọta iTunes Library.itl na iTunes Library.xml.
Detuo ndị a faịlụ na-echekwa ha na ebe dị iche, na a na nchekwa na gị na desktọọpụ ihe atụ. Ihichapụ mbụ n'anya.
Ugbu a na-emeghe iTunes, na-aga "Njikwa" họrọ "Library" wee "Import Playlist". Agagharị aka ịchọta ndị nchekwa ị dị nnọọ kere na gị na desktọọpụ na họrọ iTunes.xml wee họrọ Mepee.
iTunes ga-amalite importing tracks na yiri ọmụma site na nke a XML faịlụ na-amalite na-eke ọhụrụ iTunes Library.itl faịlụ.
Nọdụ ala azụ ma zuru ike dị ka usoro a nwere ike buru oge ụfọdụ dabere n'elu ọnụ ọgụgụ nke tracks ugbu a na gị n'ọbá akwụkwọ.
Ozugbo n'ọbá akwụkwọ e kpamkpam ewughachi ha, ị ga-achọpụta na gị niile gara aga echiche ntọala agaghịzi na-etinyere ya. Ya mere, ị ga-etinye ha otu ugboro ọzọ.
The ọghọm nke usoro ndị mara mma doro anya.
Ma, ka dị nnọọ haa ha bụrụ na ị chefuru achọpụta: 1.-ewughachi iTunes n'ọbá akwụkwọ na-agụnye a otutu ntuziaka oru; chọta nchekwa, idetuo ha ka ha dị iche iche na ọnọdụ, ihichapụ gara aga ndị na na na otú pụta.
2. Usoro a na-ewe a otutu oge.
3. Ihe nwere ike na-aga na-ezighị ezi; dị ka ụmụ mmadụ, e nwere bụ mgbe a ohere nke njehie. Ị nwere ike ihichapụ na-ezighị ezi faịlụ ma ọ bụ nwere ike ichefu ka ihichapụ mbụ faịlụ ma ọ bụ ihe ọzọ na-nwere ike ịkpata emerụ gị ọbá akwụkwọ kama iwughachi ya
4. Ihe nwere ike na-aga na-ezighị ezi; dị ka ụmụ mmadụ, e nwere bụ mgbe a ohere nke njehie. Ị nwere ike ihichapụ na-ezighị ezi faịlụ ma ọ bụ nwere ike ichefu ka ihichapụ mbụ faịlụ ma ọ bụ ihe ọzọ na-nwere ike ịkpata emerụ gị ọbá akwụkwọ kama iwughachi ya
The mfe karịa Method wughachi
Ugbu a, na anyị maara na ihe a oké ọgbaghara iwughachi gị onwe gị ọbá akwụkwọ aka nwere ike ịbụ na anyị nile ga-achọ ka e wughachi anyị ọba akwụkwọ iji ụfọdụ mfe ọzọ. Ma, otu onye nwere ike ịjụ, adịghị ihe ọzọ dị adị n'ezie? Azịza nke ajụjụ dị mfe bụ "Wondershare TunesGo"
Wondershare TunesGo bụ ihe dị mfe na fun iTunes njikwa na-ahapụ gị jikwaa niile nke gị iTunes data gafee niile nke ngwaọrụ gị (iPads, iPhones wdg) na-enweghị na-aga site iTunes oge ọ bụla. Ọzọkwa, ọ na-enyere ahazi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ site scanning nke na-efu album artwork, efu mkpado, oyiri songs na-efu tracks wdg na fixes ọ na-akpaghị aka na click nke a otu bọtịnụ. Ọ nwekwara ike iji ihe ndabere gị data, jikwaa kọntaktị gị ma nyefee foto site na otu apple ngwaọrụ ọzọ. Ọ bụ dakọtara na Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X, iOS8 nakwa dị ka Android na Windows igwe na android 2.1 na n'elu.
Mgbe-emecha na nbudata na echichi, na-emeghe TunesGo ma họrọ "wughachi iTunes Library"
Jikọọ ọ bụla nke gị apple ngwaọrụ gị emelitere iTunes Library. Mgbe initializing usoro na na na wụnye chọrọ ọkwọ ụgbọala, a "Malite" nhọrọ ga-egosi n'elu. Pịa "Malite", TunesGo ga-akpaghị aka na-amalite ịgụ isiokwu ndị iTunes n'ọbá akwụkwọ n'ime ngwaọrụ gị na gị na laptọọpụ / kọmputa maka iche.
Pịa "Detuo na iTunes" na-amalite na-ebufe ọdịyo faịlụ site na ngwaọrụ gị gị na laptọọpụ / kọmputa.
Mgbe Iṅomi usoro dechara, a nchịkọta nke depụtaghachiri ihe ga-egosi na TunesGo mmịfe menu tinyere a ngosi na-agwa gị nke ọma ọ dechara Iṅomi usoro.
Cheta na ngwaọrụ gị kwesịrị nwere iTunes arụnyere ugbua na gị emelitere iTunes ọbá akwụkwọ TunesGo ịchọpụta na-idetuo efu ọdịyo faịlụ.
Ugbu a, dị ka ị nwere ike chọpụtara, TunesGo-eme ka ọ a otutu mfe wughachi gị iTunes Ọbá akwụkwọ na na kwa na-efu nke otu click. Ị na-adịghị chọrọ idetu, ihichapụ ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara ọ bụla faịlụ, e nweghị ekwe omume nke mmadụ njehie na ị na-adịghị mkpa ka nchegbu banyere gị data ịlụ emerụ. Gị ọbá akwụkwọ ego n'anya wughachi na a nnọọ obere oge mgbe ị nwere ike ịga na mezue ị ọzọ aga-eme na dịgodị.
Top 3 iTunes ndabere Alternative
> Resource> iTunes> Olee wughachi iTunes n'ọbá akwụkwọ